दोस्रो बिहेपछि हरिवंश के भन्छन् ? | Mysansar Entertainment
Home » Nepali Film » दोस्रो बिहेपछि हरिवंश के भन्छन् ?
दोस्रो बिहेपछि हरिवंश के भन्छन् ?
Posted by E! MySansar on Jun 23, 2012 in Nepali Film | 15 comments
यतिबेला मीरालाई झल्झली सम्झिरहेको छु । बिहेपछि उनको याद झन् बढेको महसुस भइरहेको छ । मैले उनलाई देउताको स्थानमा राखेको छु । मेरो शरीरको आधी पाटो उनकै हो । अर्को बिहेको निर्णय लिनुअघि मैले आँखा चिम्लेर उनको प्रार्थना गरेँ । आशीर्वाद लिएँ । अब रमिलालाई तिम्रो रूपमा देख्न पाऊँ भनेर शक्ति मागेँ ।
श्रीमती भनेको घरको प्राण हुन् । प्राण नै झिकेपछि त्यहाँ कंकाल मात्रै बाँकी रहन्छ । करिब एक वर्षअघि मीराको देहान्त भएपछि मेरो घर त्यस्तै कंकालजस्तो भयो । कोठाहरू लथालिंग हुन्थे, विद्यार्थी बस्नेजस्तो । सामान लठिभद्र, लुगा यत्रतत्र छरिएका, भाँडाकुँडा फोहोर । मलाई वास्तवमा घरमा पस्नै मन लाग्दैनथ्यो । जम्मा दुईजना बस्थ्यौँ हामी, कान्छो छोरा मोहित र म । जेठो छोरा त्रिलोक परिवारसहित अमेरिकामै बस्छ । कान्छोले पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेकाले घरमा आउने/जाने टुंगो हँुदैन उसको । म एक्लो ज्यान, त्यो घरमा केवल बिरह मात्रै पाउँथेँ । घर पस्यो कि तनाब हुन्थ्यो । आँसु निरन्तर झरिरहन्थ्यो । भित्तामा टाँसिएका फोटोहरूले मन रुवाउँथे ।
धेरै साथीले बारम्बार आºनो घरमा बोलाउँथे । तर, जो पायो त्यहीको घरमा जान पनि मन नलाग्ने । कुनै रमाइलो जमघटमा गएँ भने त्यहाँको माहोलै बदलिन्थ्यो । मलाई देखेपछि सबै गम्भीर बन्थे । जसले गर्दा मलाई नमीठो अनुभूति हुन्थ्यो । यसबीचमा अत्यन्त नजिकका साथीहरूकहाँ मेरा धेरै रात बिते । कहिले पेप्सीकोलामा बस्ने पेट्रोल व्यवसायी मुकुन्द अधिकारीकहाँ जान्थेँ । मेरो प्रोफेसनका साथीहरू राजु ध्वजु, गौरीशंकर ध्वजु, मीराका भाइलगायतका घरमा बारम्बार गएँ । तर, दिनैपिच्छे साथीभाइकहाँ चहारेर साध्य थिएन ।
राति हत्पती निदाउन गाह्रो हुन्थ्यो । यो समस्याबारे मैले मनोचिकित्सकसित सल्लाह पनि मागेँ । उनीहरूले मलाई करिब दुई वर्षसम्म यस्तो समस्या रहने र त्यसपछि विस्तारै कम हुने बताएका छन् । डाक्टरको सल्लाहअनुसार राति निद्रा नलाग्दा स्लिपिङ ट्याब्लेट प्रयोग गर्छु ।
घरका प्राय: काम आफैँ गर्नुपथ्र्यो । एकजना काम गर्ने केटा भए पनि उसको भर हुन्थेन । छोरालाई पनि काम लगाउन मन नलाग्ने । सधँैजसो भात आफैँ पकाउँथेँ । लुगा आफैँ धुन्थेँ । एउटा लोग्ने मान्छेले घरको काम गरेर बस्नु प्राकृतिक रूपले पनि कठिन हुँदो रहेछ । त्यसमाथि मजस्तो प्रोफेसनल मान्छेलाई घरमा भात पकाएर, कुचो लगाएर बस्नु कम्ती असहज थिएन । यसले मेरो बाहिर काममा असर गरिरहेको थियो ।
मेरो यही हाल देखेर सबैले मलाई अर्को बिहे गर्न सल्लाह दिन थाले । यो बाध्यात्मक पनि हँुदै आएको थियो । जीवनसाथीको अभाव त छुट्टै हो, तर घरमा धेरैजनाको परिवार छन् भने एक्लोपना कम हुन्छ । मेरो हकमा परिवारमा दुईजना मात्र भएकाले पनि ठूलो शून्यता थियो । भित्ताहरूसित मनको बह पोख्न सकिन्नथ्यो । यस्तो अवस्थामा छोराहरूले, आफन्तले, मदनदाइले र अन्य साथीभाइले अर्को बिहे गर्न लगातार आग्रह गरे । हुँदाहुँदा मलाई चिन्ने तर मैले नचिनेकाहरूले पनि त्यही कुरा गर्न थाले । तरकारी किन्न जाँदा पसलेले पनि यो काम तपार्इंको होइन भनेर बिहे गर्न सल्लाह दिने अवस्था आयो । म सोच्न बाध्य भएँ ।
नेपाली समाजमा श्रीमती बितेपछि ९९ प्रतिशत पुरुषले अर्को बिहे गर्छन् । तर, महिलाको हकमा उल्टो हुन्छ । ९९ प्रतिशत महिलाले श्रीमान् बितेपछि अर्को बिहे गर्न सक्दैनन् । सामाजिक मान्यताहरूले महिलालाई बेरेर राख्छन् तर पुरुष फुक्का हुन्छन् । अन्तत: म ९९ प्रतिशत पुरुषभित्र परेँ ।
चार महिनाजति अगाडि बुटवलकी रमिला पाठकको कुरा आयो । उनी ११ वर्षअघि नै आºनो श्रीमान् गुमाएर माइतीमा बस्दै आएकी रहिछन् । उनको छोरा मेरा छोराको स्कुलका क्लासमेटसमेत रहेछन् । हामी दुईजनाको कुरा मिल्नसक्ने अवस्था देखेर आफन्तले बिहेको प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसमा छोराहरूको पनि पूर्ण समर्थन रह्यो । म उनलाई भेट्न राजी भएँ ।
पहिलोचोटि बालुवाटारस्थित उनका माइती बस्ने घरमै गएर भेटेँ । सामान्य कुराकानी भयो । मलाई उनी राम्री लागिन् । उनले पनि मलाई मन पराइछन् । तर, बिहेकै कुराचाहिँ भएन । त्यसपछि हाम्रो लगातार भेट हुन थाल्यो । यसबीचमा हामीले १०–१५ पटक भेट्यौँ होला । कहिले म उनको घर जान्थेँ, कहिले उनी मेरो अफिसमा आउँथिन् । म पब्लिक फिगर भएकाले सार्वजनिक स्थानमा भेट्न भने अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । भेटमा व्यावहारिक कुराकानी बढी हुन्थे । एक–अर्कालाई राम्रोसित बुझेपछि हामी बिहे गर्ने टुंगोमा पुग्यौँ ।
बिहीबार मैले अत्यन्त सीमित व्यक्तिलाई लगेको थिएँ, वैवाहिक कार्यक्रममा । त्यसमा केही साथी र आफन्त थिए । म साँच्चै भावुक भएको थिएँ जन्ती लिएर जाँदा । अत्यन्त छोटो औपचारिकतामा बिहे सकियो । करिब १५ मिनेटको मात्र कार्यक्रम भयो । केटीतर्फ पनि परिवारका सदस्य मात्र थिए । बिहेको औपचारिकतापछि डिनर गरेर करिब एक घन्टामा हामी फर्कियौँ । घरमा स्वागत गर्न छोरा मोहित र मीराका भाइ–बुहारी बसेका थिए । जाँदा नमीठो अनुभूति भइरहेको थियो भने फर्किंदा अलिकति हलुका महसुस गरेँ । घरको माहोलमा पनि केही थोरबहुत रौनकता थपियो । अमेरिकामा रहेको छोरालाई फोन गरेँ । मदन दाइले बैंककबाट फोन गरेर बधाई दिनुभयो ।
समयले बाध्य बनाएपछि मानिस जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि पनि तयार रहन्छ । आर्मीमा भर्ना भएको मान्छे गोली खान तयार हुनुपर्छ र हुन्छ । त्यस्तै मलाई पनि परिस्थितिले बाध्य बनाएको थियो, नयाँ सम्बन्ध गाँस्न । मैले रमिलाभन्दा मिल्दो जीवनसाथी अर्को खोज्न सक्दिनथेँ । उनी पनि मजस्तै एक्लो जीवन बिताइरहेकी भएकीले हाम्रो भावना मिल्छ । श्रीमान्को अभावमा एक्लैले छोरालाई हुर्काएर सक्षम बनाएकी छन्, दु:ख बुझेकी मान्छे हुन्, त्यसले मलाई प्रभाव पार्‍यो । मैले चाहेको भए अविवाहित केटीसित पनि बिहे गर्न सक्थेँ होला । तर, त्यो न्यायोचित हुन्नथ्यो ।
मीराको वियोगले लागेको घाउ शान्त हुन त त्यति सजिलो छैन । वास्तवमै उनीसित मैले कुनै गुनासोरहित २७ वर्ष गुजारेको थिएँ । यति लामो अवधिमा हामीबीच कहिल्यै गम्भीर मनमुटाव भएन, सामान्य घुर्कीबाहेक । म सबैभन्दा बढी उनको मिठासपूर्ण आवाज सम्झिन्छु । उनका आवाज क्यासेट–सिडीमा अझै सुरक्षित छन् तर उनी छैनन् । टाउको फुटाए पनि अब उनलाई फेरि पाउन सक्ने छैन । मीरामा रहेको विशेष गुण थियो, उनको कोमलता । उनी फूलजस्तै कोमल थिइन् । म केही पनि नभएको, शून्यबाट प्रगति गरेको मान्छे, यो प्रगतिलाई उनले नै संरक्षण गरिन् । उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न सक्ने गुण थियो उनमा । उनलाई भुल्ने त म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।
यद्यपि, अब मेरो जीवनमा रमिला आएकी छन् । आºनो घरपरिवार त्यागेर मेरो भरमा आएकी उनको मैले ख्याल राख्नुपर्छ । मीराका यादहरूले उनी र मेरो दाम्पत्य जीवनमा असर नगरोस् भन्नेमा म सचेत हुनुपर्छ । उनको पीडा पनि उस्तै भएकाले पक्कै सजिलो होला । छोराहरूलाई आमा गुमाएको चोट भुलाउन त लामो समय लाग्ला । उनीहरूले बुबालाई एक्लोपन महसुस नहोस् भनेर विवाहको सल्लाह दिएका हुन् । दुवै छोराले यो विवाहलाई सहज रूपमा ग्रहण गरेका छन् । रमिलाबाट उनीहरूलाई आमाको अभाव केही हदसम्म भए पनि पूर्ति हुन सक्ला ।
मेरो जीवनको उत्तराद्र्ध बाँकी छ । अझै १५ वर्ष आºनो पेसामा सक्रिय रहन सक्छु होला । सिर्जनशीलता कम हुन सक्छ तर रमिलाको आगमनपछि पहिलेजस्तै सक्रिय भएर काममा फर्कने विचार लिएको छु । मेरो बिहेलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिइदिनुभएको छ, मेरो सेन्टिमेन्ट बुझिदिनुभएको छ । फेसबुकमा सयौँले शुभकामना दिनुभएको छ । मिडियाले पनि राम्रो रूपमा लेखेका छन् । यसबाट मलाई आफूले जे गरेँ ठिकै गरेको रहेछु भन्ने आत्मबल मिलेको छ । अरूले नराम्रो सोचेका भए म कमजोर हुन सक्थेँ । म सबैप्रति आभारी छु । प्रस्तुति : चिरञ्जीवी पौडेल, साभारः सौर्य दैनिक
धेरै राम्रो छ हरिबंसा सर को भावना अब मिरा भाउजु बित्नु भएपछि आफै अर्की खोज्दै हिन्नु भएको भए राम्रो हुनेथियेना र ठान्ने थिएन तर अब समाज र छोरा हरुको राजी खुसि अनि रमिला जी पनि सेम गुजारा मा चली राख्नु भएको मान्छे र आशा छ रमिला भौजुले तेस्तै माया दिनु हुनेछ तपाइलाई जो मिरा भाउजु ले दिनुभएको थियो
दोस्रो बिहे गर्नु भएकोमा हरिबंशजी र रमिलाजीलाइ बधाई. किन गर्नु भएको भनेर स्पस्टिकरण दिन जरुरि मलाई लाग्दैन. पहाड जस्तो जिन्दगि एक्लै काट्न गाह्रो हुन्छ. जसले भोगेको छ उसले मात्र बुझ्ने कुरा हो. फेरी मिराजी जहाँ हुनु भएपनि हरिबंशजी को खुसिले नै उहाँको आत्मालाइ पनि शान्ति मिल्ने हो. मृतकहरु पनि आफुले छोडेर गएकाहरु खुसि भए खुसि हुन्छन भनिन्छ. तसर्थ उहाँको दोस्रो बिहामा उहाँका आफन्तहरु लगायत हामी समस्त उहाँलाइ चिन्नेहरुले उहाँहरुको लागि खुसि हुन सक्नु पर्छ. न कि बिहाको कारण खोज्न र तेस बारे टिका टिप्पणी गर्न. अन्त्येमा फेरी पनि उहाँहरुको आगतको लागि धेरै धेरै शुभकामना.
के हरि बंस जीले मिरा लाई साँचो माया गरेको होला त ? हरि जी को ठाउमा मिरा जी भयको भय के गर्नु हुन्थियो होला ? मलाई त सबै पुरुष यकै लाग्यो , हरि जी लाई अलग ठान्नु मेरो गल्ति रैछ
गुफ्फ़ दिन त सारै जाने को हो बाबा…
बधाई छ हरि दाई हजुर को जीवन सुखमय रहोस यहि कामना छ अब पहिले जस्तै हुनु हुन्छ भने असामा छउ ……धन्यबाद
बधाई chha लामो jindagi मा एक्लो jiwan काट्नु कठिन हुन्छ tasartha बिबाह उत्तम उपाय हो.
this proves actors r actors either on screen or off the screen,
createdaheart throbbing dramatic scenario at death of first wife now making another super hit drama after another marriage
any layman would understand why he is explaining so much !!!! certainly to get out of rumors & criticized publicly
Be positive bro. Life without life partner is like hell as explained by HB Acharya. This isagood thing that every widow should start – if everyone ( all family members ) agrees for second marriage, every widow needs to stop living lonely – they should be encouraged for the second marriage. This is how we’ve gotta amend our culture & tradition. Be positive.
हरिबंस जी ले एती लामो स्पतिकरण लेख्नु पर्ने हो होइन.. प्रस्न उठाउन सकिन्छ बिधवा महिला बिहे गर्नु भो ते हि ठुलो कुरा भो . हो यी पाठक महिला को भाग्य राम्रै रछ गाथिश दुलाहा फेला परे .अब यिन को भूमिका आफ्नो र मिरा जी को छोराहरु मा भेद भाब गर्नु भएन नत्र मिरा जी को कृपा दृस्टी नरहन सक्छ . अस्तु
Enjoy your new wife. Just stop being hypocrite. That’s it!
हरिबंश जी लाई
“घरको काम गर्न गार्हो भएर नै बिवाह गरेको” जस्तो छनक दियो नि ब्लग ले !!!!
यो संसार मा लोग्ने मान्छे जती निस्ठुरी त शायद अरु प्राणी हुँदैनन पनि होला ।जेठि श्वासनी मरेको एक बर्ष मै अर्की श्वासनी लेऔने लोग्ने ले के को माया गर्छु भनेर गफ लगाउनु नि ? धिक्कार छ तिमी हरु काम बास्ना को भोका हरुलाई । तिमी हरुले जेभन्यो मान्छे ले तेही बिश्वास गर्छन ? साचो कुरा कहिले र कसैबाट पनि लुक्न सक्दैन ।एक पल्ट आईमाई भएर बाँच्न सिक अनि थाहा हुन्छ लोग्ने श्वासनी को माया कसरी पवित्र बनाएर राख्नु पर्छ भन्ने कुरा ।
नाटक खेल्ने मान्छे ले नाटक देखौन जान्दछ ।
उ गर्न पाईयो भंन्नुस .
surendra kc. Butwal
येदि तपाई को ठाउमा मिरा दिदि भएको भए साएद उहा सेतो पहिरनमा तपाइको याद गर्दै बस्नुहुन्थ्योहोला हरि दाइ
LeaveaComment to gb
ऐश्वर्याको पनि मैनमूर्ति Posted by E! MySansar on Jul 26, 2019
यो सुगा होइन, ध्यान दिएर हेर्नुस् Posted by E! MySansar on Mar 30, 2014
झुक्याउने १२ फोटोहरु Posted by E! MySansar on Feb 8, 2014
संसारका १० छि भन्नुपर्ने कुकुरहरु Posted by E! MySansar on Feb 3, 2014
फ्रि एप्पल आइडी यसरी बनाऔँ Posted by E! MySansar on Mar 8, 2013
हरिवंशको दोस्रो बिहे Posted by E! MySansar on Jun 21, 2012
लुगा च्यातिएको हैन, स्टाइल Posted by E! MySansar on May 8, 2012
दोस्रो बिहेपछि हरिवंश के भन्छन् ? Posted by E! MySansar on Jun 23, 2012
भुटानी भाषामा ‘मै छोरी सुन्दरी’ Posted by E! MySansar on Aug 17, 2013
22 Karod Parne Nano Car Posted by E! MySansar on Sep 21, 2011
Chinnu hunchha ko hun yini ? Posted by E! MySansar on Aug 20, 2011
विद्याले अनुहारै छोपिन् Posted by E! MySansar on Jun 11, 2012
chhabi on फ्रि एप्पल आइडी यसरी बनाऔँ
Dursun on फ्यान किस
Achyut Raj Tiwari on फ्रि एप्पल आइडी यसरी बनाऔँ
Binod Bhattarai on फ्रि एप्पल आइडी यसरी बनाऔँ
Designed by Elegant Themes | Powered by MySansar